ကောင်းကင်ကို: 09/01/2011 - 10/01/2011
Program တစ်ခုရေးပြီး 1 ကနေ တစ်သန်း အထိ ကဏန်း တခုကို random ခေါက်လိုက်မယ်။ ဘယ်ကဏန်းပဲကျကျ တော်ရုံတန်ရုံ အံ့သြကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 111111 လိုမျိုး 123456 လိုမျိုး ကဏန်းကျရင်တော့ နည်းနည်း အံသြချင် အံ့သြမယ်။ ထားတော့။
အိပ်မက်တခု မက်တယ်။ “ဟေ့ကောင်၊ မင်းအိပ်မက်ထဲက အတိုင်းဖြစ်လား” လို့ မေးရင် မဖြစ်ဘူး။ နောက်တယောက်ကို မေးရင်လည်း မဖြစ်ဘူး။ နောက်တယောက်လည်း မဖြစ်ဘူး။ ထူးထူးဆန်းဆန်း တယောက်က အိပ်မက်ထဲက အတိုင်း အပြင်မှာပါ လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါဆို့။ ဖြစ်နိုင်ချေကို သချာင်္နည်းနဲ့ ဥပမာပေးပြီး တွက်ပြရလွယ်အောင် အိပ်မက်အတိုင်း ဖြစ်လာစရာ အဖြစ်အပျက်က ၁ ခု ရှိနေပြီး အိပ်မက်အတိုင်း မဟုတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်က ၉၉ ခု ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် လူအယောက်တရာမှာ တယောက်က အိပ်မက် အတိုင်းဖြစ်တော့မယ်။ လူတသန်းရှိရင် အယောက် တသောင်းက အိပ်မက် အတိုင်းဖြစ်တော့မယ်။ အဲဒီ့လူတသောင်းစုမိသွားရင်၊ သူတို့ရဲ့ အသံတွေ စုမိသွားရင် အိပ်မက်အတိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ ထွက်လာတော့မယ်။ ဟို လူပေါင်း ကိုးသိန်းကိုးသောင်းက အိပ်မက်အတိုင်း မဖြစ်တာကိုကျတော့ မမြင်ကြတော့ဘူး။ ထူးဆန်းတာ ထူးခြားတာက လူ့စိတ်ကို ထိခိုက်လွယ်တယ်လေ။
လူဆိုတာ ဖြစ်လာရင် ကားတိုက်သေမယ်၊ မိုးကြိုးပစ်သေမယ်၊ ရောဂါနဲ့သေမယ် အဲလိုဖြစ်နိုင်ချေတွေ ရှိနေမှာပဲ။ percentage အရ ဥပမာ လူဆယ်သန်းမှာ တယောက် မိုးကြိုး ပစ်ခံရလို့ သေမယ်ဆိုပါစို့။ လူပေါင်းသန်းခြောက်ထောင် ပြီးတော့ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ကြည့်လိုက်ရင် မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ သေတဲ့လူလည်း နည်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေတဲ့ လူကလည်း လူဆိုတော့ လူပီပီ ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော လုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ အဲဒီ့တော့ အဲဒီ့လူ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာ တခုခုနဲ့ ချိတ်ပြီးတွေးလိုက်ကြရော။ အဲဒါနဲ့ ဒါလုပ်ရင် မိုးကြိုးပစ်ခံရတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပေါ်လာတော့တာပဲ။ တကယ်က သူ့လိုပဲ နည်းတူ လုပ်ပြီး ဘာမှမဖြစ်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတာကိုတော့ လျစ်လျူ ရှုထားကြတယ်လေ။
အိပ်မက်ကိစ္စတွေ အကြားအမြင် ကိစ္စတွေကို ပြန်တွေးကြည့်ရင် အိပ်မက်အတိုင်း မဖြစ်တာ၊ အကြားအမြင်တွေ မှားတာ တွေက များပေမယ့် တခုလေး မှန်ရင်ပဲ လူတွေက တန်းတန်းစွဲ လုပ်ကြ၊ တအံ့တသြ လုပ်ကြတာကိုး။ မှားတဲ့ အရာတွေကိုတော့ မေ့နေကြတယ်။ ဒီလိုပဲ ပရိတ်ရွတ်လို့ ဘေးကင်းတယ်၊ ဘုရားသခင် ဆီမှာ ဆုတောင်းလို့ အလိုပြည့်သွားတယ်၊ ဂါထာရွတ်လို့မီးကွင်းသွားတယ်ဆိုတာက သူ့ဘာသာသူ random နံပါတ် ထဲက ကဏန်းတခု ကျသလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်သွားတာမျိုးပါ။ အခေါက်တိုင်း ရာနှုန်းပြည့် ပရိတ်ရွတ်လို့ ဘေးကင်း၊ ဘုရားသခင် ဆီမှာ ဆုတောင်းလို့ ဆုတောင်းပြည့်၊ ဂါထာရွတ်လို့ မီးကွင်းသွားမှသာ အမှန်တရားလို့ ပြောလို့ ရမှာပေါ့။ မှားတဲ့ ၉၉ ၇ာခိုင်နှုန်းကို လျစ်လျူရှုပြီး မှန်တဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး အမှတ်ပြည့်ပေးရင်တော့ အမြဲတမ်း အမှတ်တရာ အပြည့် ပေးနေရတော့မှာပေါ့။
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ရေဘဝဲက ဆက်တိုက်မှန်သွားတယ်ဆိုတာ၊ တချို့လူတွေ ရှေ့ဖြစ်ဟောတာ မှန်သွားတယ်ဆိုတာကလည်း ကဏန်းတွေ random ခေါက်တာ 1111111 ကဏန်းကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျသလိုပဲ သူတို့လည်း probability တခုအရ မှန်သွားနိုင်တာပဲလေ။ မှန်တိုင်း ကိုးကွယ်ရတော့မှာလား။
တကယ်ဆို အဲလို တဖွဖွ အထူးအဆန်းလုပ်ပြောနေကတည်းက အဲဒါက အမှန်တရား မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြနေတာ။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်။ နက်ဖန်စာမေးပွဲစစ်မယ်လို့ ဆရာမက ပြောပြီး နောက်နေ့တကယ်စစ်ရင် အဲဒါက reality ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းလွန်းသွားတဲ့ အခါမှာသာ တဖွဖွနဲ့ အထူးအဆန်းအဖြစ် ပြောနေကြတာပါ။ အိပ်မက်တိုင်းသာ တကယ်ဖြစ်တယ်၊ လူတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေကသာ မှန်နေကျဆို ဘယ်သူမှ အဲဒါကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ တခါတခါမှ ကွက်မှန်သွားမှသာ “မှန်တယ်ဟဲ့” ဘာညာနဲ့ အထူးအဆန်း လုပ်ပြောနေရတာကိုက တကယ့်အမှန်တရား မဟုတ်မှန်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေအရမ်းနည်းနည်းလေးထဲက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တခုဖြစ်သွားမှန်းကို ဝန်ခံရာတောင် ကျပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ရေဘဝဲ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်လောက်မှန်မှန်၊ ဘယ်သူတွေ အကြားအမြင် ဘယ်လောက်မှန်မှန် တကယ်တော့ မှန်နိုင်ချေလေး probability လေး ရှိနေတာမို့ အံ့သြစရာ မလိုပါဘူး။ probability အရ ရာနှုန်းပြည့်လည်း တခါတခါ ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ ရေဘဝဲ မှန်သွားတယ်ဆိုတာကလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အံစာတုံးခေါက်မယ် ဆိုပါစို့။ ခေါက်တဲ့လူတွေထဲမှာ အားလုံးက တစ်ကနေ ခြောက် ကျချင်တာ ကျနေပြီးတော့ တယောက်တည်းက ကွက်ပြီး သူခေါက်သမျှ အခေါက်တိုင်းမှာ ၁ တွေချည်း ကျတာလည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေတာပဲ။ ရေဘဝဲကလည်း အဲဒီ့လူနဲ့ တူတာပေါ့။
ဒါကြောင့် တချို့ကိစ္စတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ထူးဆန်းနေနေ ဖြစ်နိုင်ချေများစွာထဲက တခုဖြစ်သွားတာမို့ အံ့သြ စရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းနည်းလွန်းလို့သာ ကျနော်တို့ အရေးတယူ ပြောနေရတာဖြစ်ပြီး အဲလိုအရာမျိုးက Universal Truth အဖြစ် လက်ခံဖို့ ပိုပြီး အလှမ်းဝေးလှကြောင်းပါ။
[[ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ မှန်အောင်ဟောခဲ့တဲ့ ရေဘဝဲ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းက သချာင်္နဲ့ ရှင်းပြလို့ ရပါတယ်။0ကနေ 127 အထိ ကဏန်းတွေ Random ခေါက်တာ “127” ကျတာကို လူတွေ အံ့သြနေကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ စုစုပေါင်း ရေဘဝဲ ဟောတာက ခုနစ်ပွဲမို့လား။ တစ်ပွဲချင်းစီ ကြည့်ရင်တော့ မှန်ဖို့က ၅၀ ရာခိုင်းနှုန်း အထိ ရှိတယ်။ ခုနစ်ပွဲဆက်တိုက်ကျတော့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်တော့ဘူး။ “မှားမှားမှားမှားမှားမှားမှား” (၇ပွဲမို့လို့ ၇ခု) “မှားမှားမှားမှားမှားမှားမှန်” ကနေ “မှန်မှန်မှန်မှန်မှန်မှန်မှန်” အထိ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို တွဲလိုက်ရင်….ကွန်ပျူတာသမားဆို မှားကို0ထား မှန်ကို 1 ထားရင် “0000000” “0000001” စသည်ဖြင့် တွဲလိုက်ရင် Two to the power7ကို ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါက ၁၂၈။ ဖြစ်နိုင်ချေက ၁၂၈ ခုမှာ တခုဆိုတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး။ လူ ၁၂၈ ယောက်မဲနှိုက်တာ တယောက် ပေါက်သွားသလောက်ပါပဲ။ ထီပေါက်တာလောက်တောင် မထူးဆန်းဘူး။ အဲဒါကို လူတွေ အံ့သြနေတာ။ ၁၂၇လို့ ပြောရတာက0ကနေ စထားလို့။]]
[[မရှင်းရင်တော့ သုံးပွဲကို စဉ်းစားကြည့်။0က မှားတာ။ 1 က မှန်တာ။ 000 001 010 011 100 101 110 111 .....111 က အကုန်မှန်တာ။ သုံးပွဲတည်းဆိုတော့ Two to the Power 3= 8]]
Posted by Kaung Kin Ko at 2:33 PM3comments: Links to this post
လောက နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုဖို့
ကျနော့်အတွက် အိုအေစစ် ကောဌာသပေါ့
အေးမြတဲ့ မီးတောက်လေးကိုပဲ အဖော်ပြုမယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 10:28 AM5comments: Links to this post
လျှာနဲ့သွားရဲ့ ကကြိုး (by ကောင်းကင်ကို + ခရေငယ်)
နံနက်တိုင်း ကျနော် ဖတ်ချင်တဲ့ သတင်းက
အကြင်နာတွေ ထည့်ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီတခွက်
အရန်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း။
နေ့လယ်တိုင်း ကျမ ဖန်တီးချင်တဲ့ လက်ရာက
ယုယမှုနိုင်းချင်းနဲ့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး။
ညနေတိုင်း ကျနော် နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းက
စကားတွေစွတ် ဇွတ်တရွတ် ပြောနေတဲ့
ကရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် လေး။
ညတိုင်း ကျမ မက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်က
ကလေးဆန် နွဲ့ဆိုးကို ချစ်ခြင်းနဲ့ထွေးဖက်မယ့်
အားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ သူ့လက်တွေ . . . ။
Posted by Kaung Kin Ko at 12:11 PM7comments: Links to this post
တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရ မကောင်းတိုင်း တရုတ်အားလုံးကို မုန်းကြေး တိုက်ခိုက်ကြေး ဆိုရင်…..မြန်မာအစိုးရက တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် နှိပ်စက်နေတာတွေ၊ ပေါ်တာဆွဲတာတွေ၊ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေကို ကြည့်ပြီး မြန်မာအားလုံး မုဒိမ်းကောင်တွေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်းကောင်တွေလို့ ပြောလာကြရင်ကော ကျနော်တို့ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။ ခက်တာက ကျနော်တို့ နိုင်ငံက အစိုးရဘက်ကရော၊ အတိုက်အခံဘက်က တချို့ကပါ လူမျိုးရေးနဲ့ ခုချိန်ထိ မှိုင်းတိုက်လို့ ကောင်းနေတုန်း။
လူမျိုးပျောက် မပျောက် ဆိုတာကတော့ ကျနော်လက်ခံထားတဲ့ အနိစ္စ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် ဘယ်ဟာကမှမှ မမြဲတာ။ တနေ့ ပျောက်မှာပဲ။ လူမျိုးတင်မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးပျက်ပြီး လူအားလုံးလည်း ပျောက်ချင် ပျောက်သွားမှာပဲ။ လူမျိုးပျောက်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျနော် တခါတော့ ပြောဖူးတယ်။ ပျူလူမျိုးတွေ ပျောက်သွားတော့ ဘယ်သူကများ ဝမ်းနည်းနေလို့လဲ။ အခုခေတ်ရှိနေတဲ့ လူမျိုးတွေက ဘယ်သူက ပျူလူမျိုး တွေပျောက်ဆုံးမှု အတွက် ဝမ်းနည်းနေလို့လဲ။ လူမျိုးတမျိုး ဆက်လက် တည်မြဲရေးအတွက် အခုရှိနေတဲ့ လူမျိုးတွေကသာ ပူပန်နေကြတာ၊ ပျောက်မပျောက် ဘယ်သူမှ သေချာ မပြောနိုင်သလို ပျောက်သွားခဲ့ရင်လည်း နောက်ခေတ်ရဲ့ လူမျိုးအသစ်တွေက အထူးတလည် ဝမ်းနည်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘာသာသူတို့ အဆင်ပြေနေရင် ဝမ်းသာနေမှာပါပဲ။
အခုခေတ် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ကို ကျနော်တို့ ပြန်မေးကြည့်ရအောင်။ ဆုနှစ်ခုထဲက ကြိုက်တဲ့ ဆုတခုကို တောင်းလို့ ရတယ် ဆိုပါစို့။ ရှေးတုန်းက ပျူလူမျိုးတွေ မပျောက်ရေး (ဒါမှမဟုတ်) ခုခေတ်ရှိနေတဲ့ မြန်မာတွေ ချမ်းသာရေးဆို ကျနော်တို့ ဘာကို ရွေးမတုန်း? ခုခေတ်လူတွေ ချမ်းသာရေးကိုပဲ ရွေးမှာမို့လား။
ဘာသာရေးတွေ အားလုံးနီးပါးမှာ ကောင်းတဲ့ အချက်တခုက လူမျိုးစွဲ မရှိတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကောင်းတဲ့ အချက်ကျတော့ တော်တော်များများက လျစ်လျူရှုထားကြတယ်။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး အော်နေတဲ့သူတွေလည်း သေချာစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်။ ကိုယ်က ဒီမိုကရေစီတွေ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို တဘက်မှာ အော်နေပြီးတော့ တဘက်မှာ တခြားသူတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကို လိုက်ချုပ်ချယ်နေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်တောင်းတဲ့ အယူအဆကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်မခံနိုင်သလို ဖြစ်နေပြီ။
“ရာဇဝင်အဆက်ဆက်မှာ လူမျိုးအချင်းချင်းပေါင်းပြီး လူမျိုးသစ်ဖြစ်လာတာ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးက တစ်မျိုးကို မျိုသွားတာတွေ ရှိသားပဲ။ တရုတ်ခေါ်ခေါ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေါ်ခေါ် လူတွေလည်း လူလူချင်း ရောနှောသွားတာပဲ၊ အထွေးတော့ ဘာမှ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး၊ ဗမာမှ ယူမယ် စိတ်မကူးပါဘူး။ တကယ်တော့ ဂျာမန်ကောင်းကင်မှာ ဂျူးလူမျိုးတွေ ပြာကျတဲ့ အငွေ့နဲ့ မှောင်မည်းသွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးသာ ကြောက်စရာ ရွံစရာပါ”
(မှတ်ချက်။ ။ စာကိုသေချာဖတ်စေချင်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံဆည်နဲ့ တရုတ်အစိုးရကို ထောက်ခံနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မယ့် စီမံကိန်းမှန်သမျှ၊ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အစိုးရ မှန်သမျှကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရ မကောင်းတာနဲ့ တရုတ်လူမျိုးတိုင်းကို မုန်းတီးရမယ် ဆိုတာကို လက်မခံခြင်းပါ။ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို မကြိုက်ကြောင်း ဦးတည်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်)
Posted by Kaung Kin Ko at 1:12 AM 20 comments: Links to this post
မင်းလည်း ခံစားချင်တဲ့ အရာ
ငါလည်း မှောက်မှားချင်တဲ့ အရာ။
ချည်မျှင်နဲ့ အဝတ်အထည်တွေ ခြားထားလို့
ငါတို့ တယောက်ကို တယောက် မမြင်ရဘူး။
ငါတို့ တယောက်နဲ့ တယောက် မနီးရဘူး။
သုခဘုံနဲ့ လွဲခဲ့တယ်။ ။
Posted by Kaung Kin Ko at 6:53 PM 1 comment: Links to this post
Atheist တယောက်ရဲ့ (ရောက်တတ်ရာရာ) ခံစားချက်
ဘာသာရေးတွေကို ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ဝေဖန်တဲ့ အခါ လူတွေ ဘာသာမဲ့ ဖြစ်လာဖို့ မရည်ရွယ် မမျှော်မှန်း ထားပါဘူး။ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကိုယ်နေနေတာကို သူတို့ရဲ့ ဟိုပေတံနဲ့ လာတိုင်း၊ ဒီပေတံနဲ့ လာတိုင်း မတိုင်းတော့ပဲ သူတို့ ယုံကြည်မှုဟာ သူတို့အတွက်လောက်ပဲ အမှန်တရား ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာလောက်ကို သဘောပေါက်လာကြရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ။ “ဒါက ငါ့အတွက်ပဲ အမှန်တရား၊ ဒါက အဓိပ္ပါယ် မရှိပေမယ့် ဒါကို ငါလုပ်ရင် ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒါကြောင့် ငါလုပ်တာ” လို့ နှလုံးသွင်းထားတဲ့ သူဆိုရင် ကျနော့်တယောက်တည်း အနေနဲ့တော့ ဘာမှ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာမဲ့ခြင်း ကိုလည်း absolute truth အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ ကျနော်က (ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ဘာသာမဲ့တာက ကိုးကွယ်တာ မရှိတာပဲ ရှိတာ။ ကျန်တဲ့ဟာတွေ မှားတယ်ထင်တယ်လို့ပဲ ပြောနိုင်တာ။ အမှန်တရားကို တွေ့ရှိခြင်းမှ မဟုတ်တာ) ဘာသာရေး သမားတွေလည်း သူတို့ဟာလည်း သူတို့အတွက်ပဲ အမှန်တရားလို့ သဘောထားကြီးပေးရင် အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားမယ် ထင်တယ်။ တဘက်မှာ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တာကို သူများက မှားတယ်လို့ ထင်လည်း စိတ်ဆိုးစရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အဲဒါက ကိုယ် တယောက်တည်း အတွက် အမှန်တရား ဖြစ်နေလို့။
ဘာသာရေးမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အနုပညာ၊ ကဗျာ၊ စာပေ အဲဒါတွေ အားလုံးလည်း ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်ရင် universal truth မှ မဟုတ်တာ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ချမ်းသာရင် တန်ဖိုးထား၊ ဒါကို ဝေဖန်လာတဲ့သူလည်း ရှိမယ်။ ပြန်ပြီးချေပနိုင်တယ်။ စိတ်ဆိုးစရာတော့ မဟုတ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေလောက ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေး လောကဖြစ်ဖြစ် များနေတာက ကိုယ့်ဟာမှ ကိုယ့်ဟာ ဆိုတဲ့အစွဲတွေပဲ။ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေက ပြောကြတယ်။ အနုပညာကို မခံစားတတ်သူသည် လူပင်မဖြစ်ထိုက်တဲ့။ အဲဒါလည်း တဘက်စွန်းပါ။ ကျနော်က အနုပညာကို အရမ်းမြတ်နိုးပေမယ့် မင်းတို့ဟာတွေ ဘာမှ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင်လည်း လက်ခံကျေနပ် နိုင်တဲ့သူပါ။ ကိုယ့် မြတ်နိုးမှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာ မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ သူပြောတာလည်း သူ့ရှုထောင့်က ဟုတ်နေတာပဲလေ။ အဲဒီ့တော့တချို့ အနုပညာရှင်တွေ ပြောပြောနေတဲ့ ကဗျာဆရာဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးကိုပဲ ကယ်တင်သလိုလို၊ ကဗျာကို နားမလည်တဲ့လူကပဲ အသုံးမကျတော့သလိုလို၊ ဘာသာရေးမှာလည်း အဲလိုပါပဲ။ တဘက်သတ် ဆန်တာ တွေ လျှော့ကြရင် ကောင်းမယ်။ ကဗျာကို နားမလည်ပဲနဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး။ ဘာသာရေးကို နားမလည်ပဲနဲ့ စိတ်ကောင်း ရှိတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး။
ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ဝေဖန်တဲ့ အခါ ဝေဖန်သလဲဆိုတာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ့်ကို လာဝေဖန်ရင် နှစ်သက်သလို ကိုယ်ကလည်း ဝေဖန်ချင်လို့ပါ။ ဝေဖန်ချင်းက စဉ်းစားစရာတွေကို ဆွပေးတယ်လို့ ကျနော်ယူဆပြီး လူတွေရဲ့ အတွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ယူဆလို့ တခုမှ မချွင်းမချန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်တဲ့ အခါလည်းရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ပဋိပက္ခကို မျှော်လင့်ရုံသက်သက် ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ ဘာသာရေးကို tool တခုလိုပဲ အသုံးချ၊ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံး။ မကောင်းတဲ့နေရာမှာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေ…အဲလိုလူမျိုးတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ တဘက်မှာ လောဂျစ်ရဲ့ အခန်း၊ လောဂျစ်ရဲ့ role ကိုလည်း မြှင့်တင်ချင်သူမို့၊ အဲလိုလုပ်ရတာ ဝါသနာထုံလို့ လုပ်နေတာလည်း ပါပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒေးကား အယူအဆတခုခုဖြစ်ဖြစ်၊ နစ်ရှေးရဲ့ အယူအဆ တခုခုဖြစ်ဖြစ် တင်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့က သာမန် ပုထုဇဉ်တွေလေ၊ လမ်းလွဲနေပြီ ဘာညာ ပြောတာမျိုး၊ ကိုယ်စီ ဘာသာရေး ပေတဲ့နဲ့ လာလာတိုင်းကြတာမျိုးကို မနှစ်သက်တဲ့အတွက် အမှန်တရားလို့ထင်ဆမှု အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တာကို သိသာစေဖို့လောက်သာ ဘာသာရေးကို ဝေဖန်ခြင်းပါ။ ဘာသာရေးကို ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကို မုန်းမယ်ဆိုရင်တော့ အဖိုးအဖွား အဖေအမေ က စပြီး မုန်းနေရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ဘာသာမဲ့ကို ဘာသာရေး သမားတွေက မုန်းမယ်ဆိုရင်လည်း တချိန်ချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သားမြေးတွေကို မုန်းရတာမျိုး မဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မလဲ။ အယူအဆ မတူရင်တောင် လူကိုမမုန်းပဲ အယူအဆအကြောင်း သက်သက်သာ ပြောကြရင် လောကကြီး ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းလိမ့်မလဲ။
Posted by Kaung Kin Ko at 6:00 PM 11 comments: Links to this post
ငါတို့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း (မိုဃ်းဇော်)
ငါတို့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း။ ။
Posted by Kaung Kin Ko at 4:20 PM5comments: Links to this post
ငါတို့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း (မိုဃ်းေ...